नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : आफ्नै भाषाबाट ठगिन्छन् अमेरिकाका नेपाली !
आफ्नै भाषाबाट ठगिन्छन् अमेरिकाका नेपाली !
भाषाको सन्दर्भमा नेल्सन मण्डेलाको एउटा प्रख्यात भनाई छ–‘तिमीले अर्को मानिससँग उसले बुझ्नेमात्र भाषामा कुराकानी गर्‍यौ भने त्यो कुरा उसको दिमागमा जान्छ। यदि तिमीले उसैको भाषामा कुराकानी गर्यौं भने उसको हृदयमा बस्छ।’
यतिखेर अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायमा चर्चाबहसको शिखरमा छ– ‘जीवन बिमा’ का नाममा बेचिँदै आएका ‘प्रोडक्ट’ को। यो बीमामा नेपाली श्वेत अमेरिकन, अश्वेत अमेरिकन, मेक्सिकोबाट आएका, अन्य एसियाली देश वा भारतबाट आएकाबाट होइन नेपाली भाषी नै ठगिएका छन्। मातृभूमिबाट सारा परिवार, वन्धुबान्धवबाट छुट्टिएर सात समुद्रवारी आइपुग्दा भाषाले गराएको निकटताका आधारमा आफूहरु ठगिएको अभिव्यक्त नेपालीहरुले दिइराखेका छन्।
भनाई नै छ, मानिसलाई सबैभन्दा नजिक अनि टाढा बनाउने भाषा नै हो। संसारको कुनैपनि कुनामा पुग्दा नेपालीमा कसैले बोलेको सुनेपछि टक्क अडिएर कताबाट आवाज आइरहेको छ भनेर आँखा नचाइन्छ। त्यसपछि जति नै व्यस्त भएपनि बोल्ने मानिस नजिक गएर सोधिन्छ,‘तपाई पनि नेपाली हो ?’ यति भएपछि दोहोरो कुराकानी, चिनापर्ची सुरु हुन्छ । भाषा जति मानिसलाई नजिक बनाउने अरु माध्यम केहि छैन र हुँदैन । भाषापछि नजिक तुल्याउने माध्यममा भूगोल, धर्म त्यसपछि
विस्तारै जात, क्षेत्रीयता आदी आउँछन्।
अमेरिकामा भाषा, भूगोलकै कारणले एक नेपालीले अर्का नेपालीलाई शोषण र अनुचित लाभ लिइरहेको तथ्य बीमाको सन्दर्भमा मात्र लागु हुँदैन। धेरैतिर आफ्नै नेपालीले फसाए, सगोत्रीले डुबाए, साथीले धोका दिए भनेजस्ता अभिव्यक्ति जताततै सुन्न पाइन्छ आजभोलि।
नेपालसँग सीमाना जोडिएको भारतीय शहर रक्सौलबासी भन्दा भुटानको थिम्पुमा बस्ने नेपालीभाषी कोहीकसैसँग अमेरिकामा भेट भयो भने छिटै आत्मिय हुन्छ। भाषाकै कारणले गाँसिएको यस्तै आत्मियता स्वार्थसिद्धिको माध्यम बनिरहेको छ प्रवासमा।
भाषाकै कारणले गाँसिएको आत्मियताको शिकार अमेरिकामा थुप्रै नेपाली भइरहेका छन्। जसको पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ।
डिभी परेर पाँच वर्ष अघि एक नेपाली परिवार अमेरिकी राज्य मिचिगन आइपुग्यो। डिभी पर्नेवालाको बच्चाबच्ची थिएनन्। उनीहरु नेपालमा रहेको व्यवसाय राम्रो मूल्यमा बेचेर केही रकम यता ल्याउनेगरी विस्तारै आउने योजनामा थिए । यता अमेरिकामा रहेको साथीले तारन्तार फोन गरेर भन्न थाले–‘लौ तुरुन्तै आइहाल, तिमीहरुलाई यहाँ बस्ने घर, काम गर्ने जागिर सबै खोजिसक्या छु मैले । जतिसक्दो चाँडो गर है । नत्र यो अपार्टमेन्ट, काम सबै गुम्नसक्छ ।’
हो न हो साथीले भनेको कुरामा डिभी पर्नेले विश्वास गर्यो। जे जति व्यवसाय छ सबै कौडीको मोलमा मिल्काएर ऊ हतारिँदै अर्को महिना अमेरिका उड्यो।
यताको साथीले आफ्नै अपार्टमेन्टमा लगेर राख्यो। चार दिनपछि भन्यो–‘हामी त तिमीहरुलाई पर्खेरमात्र बसेका हौं। नत्र अघिल्लो महिना नै हामी न्यूयोर्क सर्ने निधो भएको थियो। अब यो अपार्टमेन्ट मेरो नाममा भएपनि तिमीहरुकै हो। यसको भाडा पाँचसय डलर पर्छ महिनाको। मलाई हरेक महिनाको तीन तारिकसम्म तिमीहरुले चेक पठाइदिनु हुलाकबाट। म मेरै खाताबाटै तिरिदिन्छु यसको भाडा। तिमीहरुमध्ये एकजनालाई एउटा काम खोजिदिएको छु इण्डियन रेष्टुरेन्टमा। बिस्तारै त्यहाँ काम गर्दै गएपछि मान्छे चिनिन्छ। भाउजूलाई पनि काम त्यही मिल्छ। म चाँही अब पर्सी न्यूयोर्क जान्छु।'
साथीको कुराले भरखरै अमेरिका छिरेको ऊ इन्तु न चिन्तु बन्यो। कत्रो सपना बोकेर उताको व्यापार व्यवसाय हतारमा बन्द गरेर, कौडीको भाउमा मिल्काएर हिँडेको । यता जो साथी भनेर आएको उही डेरा र त्यहाँ भएका थोत्रा सामानको समेत मूल्य तोकेर छाडेर अर्को राज्य सर्‍यो।
६ महिना लगाएर दलाललाई २४ लाख बुझाएर एक नेपाली गत वर्ष मेक्सिको हुँदै पश्चिम अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियाको सेक्रामेन्टो आइपुगे। ती नेपालीका नजिकका आफन्त कोही थिएनन् अमेरिका। पल्लोगाउँका एक व्यक्ति त्यहाँ छन् भन्ने सुनेका थिए। फोन गर्दै उनी पुगे।
एक हप्तापछि तिनै दाइले काम खोजिदिए रेष्टुराँमा। पञ्जाबीले चलाएको त्यो रेष्टुराँमा मेनेजर र केही वेटर नेपाली पनि थिए । बिहान ११ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म काम थियो ।
दिनभरी काम गर्दा रेष्टुराँमा आएका ग्राहकले थुप्रै डलर टिप्स दिन्थे। त्यो टिप्स सबै ‘वेटर’ले जम्मा गर्ने भाँडोमा राख्थे। अनि राति रेष्टुराँ बन्द गर्ने बेलामा सबै टिप्सजति मेनेजर रहेका नेपालीले आफ्नै खल्तीमा हाल्थे र निस्कन्थे। रेष्टुरामा काम गर्ने अरु वेटर, कुक कसैले एक पेनि पनि टिप्स देख्न पाउँदैनथे। सबै टिप्स नेपाली मेनेजरले कुम्ल्याउँथे।
ग्राहकलाई खुशी तुल्याउन जति सेवा गर्ने ‘वेटर’ को भूमिका हुन्छ त्यो भन्दा कम्ता खाना बनाउने ‘कुक’ को हुँदैन । त्यसो हुँदा ग्राहकबाट प्राप्त टिप्स सबैले सन्तुलित रुपमा बाँडिचुँडी गरेर लिनुपर्नेमा मेनेजर आफैं लिएर हिँड्थे। किनकी साहूले उनलाई भनेको थियो–टिप्स कसरी बाँड्ने तपाईनै निर्णय गर्नुस्। मेनेजरले निर्णय त लिए सबै आफूले नै राख्नेगरी।
‘ग्राहक रिसायो भने वेटरले गाली खानुपर्ने, अनि खुसी हुँदा दिएको टिप्सचाँही हामीले नपाउने भएपछि यस्तो नेपाली मेनेजरसँग बसेर काम गर्नुभन्दा बरु अन्तै जान्छु भनेर म सानफ्रान्सिस्को सरेँ,’ एक वर्षअघि मसँग ती नेपालीले गुनासो पोखेका थिए। यहाँ पनि एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई मौका मिल्दा कसरी पेटमा लात्तीले हान्दो रहेछ भन्ने गतिलै उदाहरण फेलापर्‍यो।
डिभी मार्फत गत वर्ष अमेरिका आइपुगेका अर्का एक नेपालीले बसेको ठाउँभन्दा १५ माइल टाढा काम पाए। बसमा झण्डै डेढ घण्टा लाग्ने भयो। उनले कार नकिनी सुखै पाएनन्। बसमा आवतजावत गर्न नै एकातिर तीन घण्टाको समय लाग्ने अर्कातिर कहिलेकाँही रात्री सिफ्टमा काम पर्दा त बस नै नपाउने भयो।
उनले गाडी सिकेर लाइसेन्स पनि लिए। अनि सेकेण्ड ह्याण्ड कारको खोजीमा लागे। ती नेपालीले कारको खोजि गरिराख्या छन् भन्ने सुनेर अर्का एक नेपाली आइपुगे।
‘ल मेरो कार छ, दुइलाख माइलमात्र कुदेको। २००६ को मोडल। म तीनहजार डलरमै दिन्छु। अरुलाई भए पाँचहजार घटि दिने थिइनँ। नयाँ किनिहालेँ, यसलाई किन राखिरहनु भनेरमात्र बेच्न लाग्या नि। तपाईं आफ्नै मान्छे पर्नुभयो। अँ नेपालमा कुन ठाउँ रे घर? अँ ल म त त्यो ठाउँमा धेरैपटक गएको छु नि। ज्यादै राम्रो ठाउँ पो हो त।’
कारको खोजीमा लागेका नेपालीलाई लाग्यो–ओहो यी दाई त सारै बेस मान्छे पो रहेछन् । मेरो गाउँठाउँ बारे पनि जान्दा रहेछन्। उनले नेपालबाट ल्याएको र यता कमाएको समेत गरी जम्मा गरिराखेको एकसय दरका ३० वटा नोट दिए। कारको उनको भयो।
अब उनी कार चलाएर काममा जानथाले। तर दोस्रो हप्तानै कारमा खराबी आयो। मेकानिक्समा देखाउँदा एकहजार चारसय डलर लाग्ने, चारवटै टायर फेर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकोले त्यसका निम्ति थप ६ सय डलर गरी झण्डै दुईहजार डलर लाग्ने इस्टिमेट आयो। कार किनेकै अर्को हप्ता दुईहजार डलर मर्मतमा खर्चिनुपर्‍यो। बेच्ने नेपालीले कारलाई मर्मत गरेर चलाउनुभन्दा नयाँ किन्नु ठीक भएर नयाँ किनेका रहेछन्। उनले कोही नपाएर नेपालीलाई नै फसाए।
यी तीनवटा त सतहमा आएका र पीडितले व्यक्त गरेपछि थाहा भएका तथ्यमात्र हुन्। एउटा नेपालीले अर्का नेपालीलाई दिएका पीडा सयौं होइनन् हजारौं छन्। तर ‘आफ्नो आङ कन्याएर आफ्नै आङ्गमा छारो किन उडाउनु’ भन्दै धेरैले सहेर बसेका छन्। जसले गर्दा धेरै घटना बाहिर आउँदैनन्।
डिभी मार्फत अमेरिका आएका साथीलाई लिन साथी सानफ्रान्सिस्को एअरपोर्ट पुग्यो । साथी आफूलाई लिन एअरपोर्ट आएको देखेपछि नेपालबाट आउने साथी निकै खुसी पनि भए।
तर उनको खुसी पाँच मिनेट पनि टिक्न पाएन । जब अमेरिकामै ८ वर्षदेखि बस्दै आएको साथीले भन्यो–‘तिमीहरुलाई लिन आउँदा मैले पुलिसको टिकट पाएँ। दुईसय डलर जरिवानाको तिमीहरुले तिरिदिनुपर्छ। किनकी तिमीहरुलाई लिन आउनु नपरेको भए यो टिकट मैले पाउनेनै थिइनँ।’
भएछ के भने साथीको परिवारलाई लिन भनेर गाडी हाँक्दा ‘ओभरस्पिड’ भएछ। अनि पुलिसको टिकट पाएछन् साथीले। पहिलोपटक विदेशीभूमिमा टेकेका डिभीवाला साथी जरिवानाको रकम सुनेर झण्डै बेहोस भए। जरिवाना पनि चानचुने हो र? नेपालीमा गणना गर्दा त्यतिखेरको झण्डै १८ हजार रुपैयाँ। उनीहरुले त्यो जरिवाना तिर्नका लागि ‘हुन्छ’, ‘हुँदैन’ केही पनि भन्न सकेनन्।
सहयोग गरेको जस्तो पनि देखाउने र भित्री रुपमा आफ्नो व्यावसायीक स्वार्थ बोकेका थुप्रै नेपालीहरुको जमघट भइसकेको छ अमेरिकामा पनि । निस्वार्थी भावनाले सहयोग गर्नेहरुको संख्या नगण्य छ । सहयोगी स्वभावका मानिसहरु सितिमिति नेपाली समाजका कार्यक्रममा समेत सरिक हुँदैनन्। किनकी मञ्चमा विराजमान हुने, खादा ओढ्ने प्रवृत्तिबाट उनीहरु दिक्क छन्।
अब बीमाको सन्दर्भ:
नेपाली समाजमा बीमाका नाममा बिक्री हुँदै आएको पिरामिड शैलीको योजना धेरै वर्षदेखि गुम्सिएर बसेको एउटा पीडा थियो । एकाध वर्ष प्रिमियम तिरेपछि ‘फसिएछ’ भन्ने जानेपछि चुपचाप लागेर बस्ने पद्धतिको विकास भएको थियो नेपाली समाजका सदस्यबीच। सामान्यका के कुरा गर्नु यो समाजमा आफूलाई ‘चल्तापूर्जा’ ठान्नेहरु नै नबुझिकन सदस्य बनेका छन्। बुझिसकेपछि समयमै सूचना हुन सकेको भए समाजका सदस्यहरुको ठूलो क्षति हुनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो। तर धेरैजना ‘म त फँसिहाले, अरु पनि फँसुन् न’ भन्दै जोखाना हेरेर बसेको अवस्था रह्यो।
अहिले एकपछि अर्कोगर्दै ‘म पनि फसे’, ‘मलाई सपनाको महल देखाइयो’, ‘मैले त साथीको नाताले विश्वास गरेँ र पढ्दै नपढी सही धस्काएर डलर तिरेको थिएँ’ देखि लिएर ‘मेरा बच्चाहरुको भविष्य देखाएर सेन्टिमेन्टल व्ल्याकमेलिङ गरियो’ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति नेपाली समुदायबाट बाहिर आइरहेका छन्।
बीमाका नाममा यस्ता पिरामिड शैलीका चिज नेपालीले नेपालीलाई बेचेछन् कि किन्ने आफैं पनि लाजले गर्दा भन्न सकेका थिएनन्। ‘मलाई २० वर्षपछि साढे दुईलाख डलर लिन पाउनुहुन्छ भनेर बीमा बेचियो, तर मैले चार हजार डलर तिरिसकेपछि थाहा पाएँ कि त्यति रकम पाउन म प्रिमियम तिर्न सुरु गरेको २० वर्षभित्र मरिसक्नु पर्थ्यो।’ कोलोराडोको डेनभरमा बस्दै आएका शैलेश पोखरेलले यो टिप्पणीकारसँग भने। अर्थात् आफू जति चाँडो मर्नसक्यो उतिनै फाइदा। २० वर्षभित्र नमरेमा जति रकम तिरिएको छ त्यो सबै ‘ढुस’ हुने। ‘आफू चाँडै मरियोस् भनेर कामना गर्नुपर्ने पनि कहिँ बीमा हुन्छ ?’ पोखरेलले भने–‘यस्तो खालको बीमा त ‘टर्म इन्सुरेन्स’ का नाममा महिनाको १०/१२ डलर तिर्नेगरी न्यूयोर्क लाइफले पहिल्यैदेखि गर्दै आएको छ।’
बीमाका नाममा ‘प्रोडक्ट’ बेच्नका लागि यतिखेर नेपाली समुदायले सुरुमै उद्धरण गरिएको नेल्सन मण्डेलाले भनेका–‘तपाईं मान्छेले बुझ्ने भाषामा कुरा गर्नुस् त्यो उसको हृदयमा बस्छ’ भन्ने वाक्यको सहारा लिए। जन्मेदेखि बोलेको, बुझेको भाषाको सहारामा नेपालीले नेपालीलाई कुनै समय नेपालमा बदनाम भएर बन्द भएको युनिटी जस्तै प्रोडक्ट बेचे।
नेपाली समुदायका कुनै पिकनिक, भेला, बिबाह, ब्रतवन्ध, भोज छाडेनन् एजेन्टहरुले। अनि त्यहाँ पुगेर नेपालीलाई नै 'मुर्गा बनाउन' सुरु गरे।
नेपालीसँग नेपालीमै बोलेर, फुलबुट्टा भरेर त्यसका विशेषता बताएपछि ‘म लिन्नँ, मलाई चाहिदैनँ’ भनेर पन्छिने कठोर मान्छे भेटिन मुस्किल पर्छ। त्यसमाथि बालबालिकाको भविष्यका बुट्टा देखाएपछि कसको पो मन पग्लिदैन र?
भाषाकै बलमा नेपाली भाषा बोल्ने भुटानी पनि जालमा परिरहेका छन्। चाहे चिठ्ठा परेर आउने नेपाली हुन् या बोर्डर पार गरेर आउने नै किन नहुन्। कतिपयलाई त उनीहरुको ‘सोसियल सेक्युरिटी नम्बर’ समेत हातमा नपरिक नै यो योजनामा सहभागी बनाएका छन्। यी सबलाई केही वर्षदेखि यता बसेर आफूलाई ‘रैथाने’ भन्न रुचाउनेले शोषण गरिराखेका छन्। कतिसम्म भने आफ्नो नाममा अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर भरखर आएका नयाँलाई त्यो अपार्टमेन्ट भाडामा लगाउँछन् महिनाको दुईतीनसय डलर कमिशन लिएर। टेलिफोन लिँइदिँदा कमिशन, गाडी किन्दा कमिशन नेपाली समाजमा केही व्यक्तिका पहिलेनै स्थापित नियमित धन्दा हुन्।
नेपालीलाई यस्तो निकम्मा भनिएको बिमा अरु कुनै समुदायका व्यक्तिले बेचेका, भिडाएका छैनन्। नेपालीबाट आएकालाई यही केही वर्ष, केही दशकदेखि बसेर केही जानेका, बुझेकाले नै बेचेका छन्।
अब कस्लाई विश्वास गर्ने, कतिसम्म विश्वास गर्ने ? लेखाजोखा आफैले गरेर अघि बढ्नु नै उचित होला।
- Source : Setopati.com